Xasan Sheekh ‘‘Madaxda talada dalka heysa way ku fashilmeen qabashada doorasho xor ah‘‘ – HalQaran.com
Xasan Sheekh ‘‘Madaxda talada dalka heysa way ku fashilmeen qabashada doorasho xor ah‘‘
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna guddoomiyaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD qeybna ka ah Madasha Xisbiyada Qaran ayaa maanta ka hadlay arrimo badan.
Xasan Sheekh ayaa faah-faahiyay go’aanka Madasha ee ku aadan arrimaha doorashooyinka Qaranka iyo shirka watashiga ah ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah DF Soomaaliya oo berri uga furmaya magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweynihii hore ayaa sheegay, in madashu ay soo dhaweyneyso wadahadal walba oo horseed u noqan kara in la helo wax heshiis lagu yahay, isaga oo dowladda federaalka ugu baaqan in ay si faah-faahsan uga jawaabto arrimaha doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dowlad goboleedyada inay xoojiyaan wadatashiyada la xiriira doorashooyinka iyo samata bixinta Qaranka, islamarkaana ay ka qeyb galiyeen dhammaan umadda Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Madaxda maanta talada dalka heysa in ay si toos ah ugu fashilmeen qabashada doorasho xor ah, sida uu yiri.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay, in dadkaasi looga baahan yahay in ay dalkooda badbadiyaan haddii Madaxda maanta ay ku guul-dareysteen.
Ugu dambeyn, Xasan Sheekh ayaa sheegay, in doorashada Soomaaliya uu maanta jahwareer badan ka taagan yahay, loona baahan yahay talo loo mideysan yahay.
Tags: Doorasho xor ah, Fashil, waqtigeeda lagu qabto, Xasan Sheekh
UPDATE: Kulamo gaar gaar ah oo weli ka socda magaalada Dhuusamareeb +(SAWIRRO)